Izindaba - Amanothi okufunda wezindlu ze-compressor
Amanothi okufunda wezindlu ze-compressor
Ukufudumala kwembulunga yonke kanye nokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuyinkinga enkulu.Ukuze kuncishiswe lokhu kukhishwa, kunomkhuba womhlaba wonke obheke emithonjeni yamandla ahlanzekile.
Kukhona ama-compressor amabili anokuhlanganiswa okubili okuhlukene, eyokuqala ehlangene ne-turbine yegesi kanti eyesibili ihlangene ne-motor kagesi, i-gas turbine isebenza ngokushiswa kwegesi kaphethiloli ebangela ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kanye nokungcoliswa komsindo, ngokuphambene nalokho, injini kagesi. ayingcolisi njenge-turbine, kungenxa yalesi sizathu senze ucwaningo lokuqhathanisa phakathi komsindo okhiqizwa i-turbo-compressor kanye nokukhiqizwa yi-motor-compressor.
Le mishini yakamuva iphakathi kwemithombo yokuqala edala inkinga yomsindo wemvelaphi yezimboni, kuye kwenziwa izifundo eziningana emhlabeni ukuze kwelashwe inkinga yomsindo wezimboni.
Imvelaphi eminingana yomsindo ingahlukaniswa ohlelweni lwe-turbo compressor:
- Kusobala ukuthi ingxenye encane yala mandla iguqulwa ibe amandla e-acoustic, ingasakazeka ohlelweni lonke futhi ibonakale njengomsindo, futhi ukudlidliza komzimba nakho kungabangela esizukulwaneni somsindo.
- Ukudlidliza kwezingxenye ze-compressor noma izindawo ezingaphezulu ngenxa yokuhlukahluka kokucindezela okukhiqizwa oketshezini.
- Ama-rotor angalingani, ukuhlikihlwa kwe-shaft, ukuhlukaniswa kwamapayipi adlidlizayo.
U-Nur Indrianti, uNandyan Banyu Biru, kanye no-Tri Wibawa, Ukuthuthukiswa kwesivimbelo somsindo we-compressor endaweni yomhlangano (Indaba ye-PT Jawa Furni Lestari), Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Ye-13 Yokukhiqiza Okuqhubekayo - Ukukhulisa Ukukhula Kokusetshenziswa Kwezinsiza, i-Procedia CIRP 40 (2016) , Amakhasi 705
I-Zannin PHT, i-Engel MS, i-Fiedler PEK, i-Bunn F. Isici somsindo wemvelo Ngokusekelwe ezilinganisweni zomsindo, imephu yomsindo kanye nezingxoxo: isifundo sesifundo eNyuvesi yase-Brazil.Amadolobha 2013;31 Amakhasi 317–27.
Isikhathi sokuthumela: Mar-23-2022